जो घटक एक दबाइ "Nikofleks" समावेश? दबाइ र यसको आकार को संरचना तल देखाइएको गरिनेछ। तपाईं पनि उहाँले के मूल्य मा analogs र contraindications कि यदि भन्नुभयो, दवादारू को प्रयोग को लागि सङ्केत गर्छ के सिक्न हुनेछ, उसलाई, विरामीहरु र यति मा बारेमा भन्न। डी
संरचना, पैकिंग र आकार
के रूप मा "Nikofleks" को उत्पादन? समीक्षा व्यवसायीक यस दबाइ मात्र विद्यमान फारम छ रिपोर्ट - लेप। कहिलेकाहीं जेल वा क्रिम रूपमा उल्लेख।
उपकरण को सक्रिय तत्व capsaicin, etilnikotinat र ethylene ग्लाइकोल salicylate छन्। यो लेप व्यावसायिक 50 G गत्ता प्याकेजहरू मा निहित छन् जो, एल्यूमीनियम बनेको ट्यूब मा उपलब्ध छ।
Pharmacological विशेष बाह्य एजेन्ट
के दबाइ "Nikofleks" को गुण? यस दबाइ को प्रयोग एक analgesic, सुल्झाउने र क्रोध उत्पन्न प्रभाव उत्पादन गर्छ।
संलग्न निर्देशन अनुसार, छलफल मलम जो vasodilatation आवेदन साइट प्रचार, साथै छाला तापमान भाग मा वृद्धि र गर्मी को अनुभूति गराउन पदार्थ पाइन्छ।
कारण यसको संरचना गर्न दबाइ को चिकित्सकीय प्रभावकारिता। अवशोषित प्रभाव, र ethylene ग्लाइकोल salicylate - - भडकाऊ गतिविधि विशेषज्ञहरूका अनुसार capsaicin परेशान गुण र ध्यान भंग, etilnikotinat possesses।
दबाइ कसरी लामो तल सूचीबद्ध छ मूल्य जो "Nikofleks", कार्य गर्न सुरु गर्छ? अभ्यास उपकरण प्रयोग को प्रभाव केही मिनेट बारेमा सुरु र एक घण्टा रहन्छ भनेर देखाउँछ।
यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ कि दबाइ को वार्मिंग प्रभाव, साथै रक्त, प्रकृति मा भडकाऊ छन् जो musculoskeletal सिस्टम को विभिन्न रोगहरु, को उपचार मा एक सकारात्मक प्रभाव सुधार गर्न आफ्नो क्षमता।
कसरी दबाइ "Nikofleks"? छाला को जेल कष्टप्रद रिसेप्टर्स र कारण प्रतिक्रिया REFLEX। यस्तो जोखिम को फलस्वरूप अतिताप र हुन्छ छाला को निस्तब्धता।
यो लेप को कार्य को संयन्त्र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली मा सक्रियता र enkephalins र endorphins को जारी, साथै सुनिंनु को साइटहरु मा कमजोर वा दुखाइ को दमन कारण छ। यो भयातुर प्रणालीमा रोमाञ्चक दलहन र irritants को अन्तरक्रिया द्वारा हुन्छ।
के रोगी "Nikofleks" को रूपमा एक दबाइ नियुक्त गर्न सकिन्छ गर्छ? अतिथि विशेषज्ञहरु यस दबाइ को निम्न सङ्केत गर्छ सुझाव:
जोडों र मांसपेशीमा दुखाइ;
sprains र मांसपेशी।
यो पनि प्रश्न मा क्रीम अक्सर अघि र तीव्र व्यायाम पछि मांसपेशी तन्तु अप न्यानो प्रयोग गरिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
राज्य के हो र बिरामीको रोग जेल "Nikofleks" को प्रयोग निषेध? डाक्टर को समीक्षा निम्न contraindications भन्छन्:
को तैयार को सामाग्री को लागि रोगी को संवेदनशीलता वृद्धि;
छ वर्ष मुनिका बच्चाहरु;
मलम को आवेदन को क्षेत्र मा छाला को निष्ठा उल्लङ्घन;
हामी पनि ध्यान दिनुहोस् गर्नुपर्छ भनेर चरम सावधानी स्कूल उमेर (6-12 वर्ष) मा लागूऔषध प्रयोग रिपोर्ट, रूपमा साथै अस्थमा (ब्रोन्कियल, एस्पिरिन) संग।
म मलम "Nikofleks" कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ?
दुखाइ राहत लागि चक्की साथै एक मलम मदत। तर, दुर्भाग्य, "Nikofleks" मा दबाइ को यस्तो फारम अवस्थित छैन। यो बाह्य प्रयोग मात्र लागि हो।
को घाउ को छाला मा सीधा जेल प्रयोग गर्नु अघि निर्देशन अनुसार राम्ररी न्यानो पानी र बच्चा साबुन संग धोए गर्नुपर्छ। अर्को, आवश्यक खाली भाग सुक्खा सखाप, र त्यसपछि यसलाई दबाइ को पातलो पत्र लागू हुन्छ।
को जेल को अधिकतम चिकित्सकीय प्रभाव लागि तेजी छाला मा rubbed गर्नुपर्छ। दबाइ को प्रयोग एक दिन 2-3 पटक को आवृत्ति।
कठिन व्यायाम मांसपेशी तन्तु ताप दवादारू गर्न4सेमी लामो पट्टी लागू हुनुपर्छ।
तपाईं संयुक्त दुखाइ बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, मलम "Nikofleks" प्रयोगको लागि पहिलो तीन दिनको लागि एक पटक एक दिन सिफारिस गरिएको र त्यसपछि दुई पटक एक दिन (साँझ र बिहान)।
के प्रतिकूल प्रतिक्रिया को जेल "Nikofleks" हुन सक्छ? यो दवादारू बारेमा समीक्षा उहाँले दुर्लभ अवस्थामा एलर्जी वा angioedema कारण मात्र हो भन्छन्। यो सामान्यतया कारण सक्रिय पदार्थ को तयारी को घृणाको गर्न हुन्छ।
को जेल लागू गरेपछि राता र झुनझुनी र आवेदन को क्षेत्र मा जल हेर्न भने चिन्ता नगर्नुहोस्। यो जो दबाइ को चिकित्सकीय कार्य को सुरुमा देखिन्छ एकदम सामान्य प्रतिक्रिया छ।
यो मिति को दबाइ अधिमात्रा नकारात्मक परिणाम निम्त्याउन भनेर "Nikofleks" कुनै प्रमाण छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, यो वास्तवमा प्रश्न मा दबाइ अनियन्त्रित र चिकित्सकको सिफारिस बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने होइन।
को निर्देशन तयारी अनुसार "Nikofleks" आउटडोर प्रयोगको लागि अभिप्रेरित अन्य medicaments को अवशोषण को प्रक्रियाहरु विस्तार गर्न। त्यसैले, आफ्नो साथ प्रयोग खराब छ। आवेदन छलफल nanodiamonds उपयोग गरदै र अन्य साधन बीच अन्तराल कम्तिमा दुई घण्टा हुनुपर्छ।
यसको आवेदन राम्ररी साबुन आफ्नो हात धुन गर्नुपर्छ पछि nanodiamonds उपयोग गरदै आँखा र अन्य श्लेम लाग्एको झिल्ली मा झर्ने बच्न।
को जेल को अधिकतम चिकित्सकीय प्रभाव हासिल गर्न 3-4 मिनेट को लागि छाला मा rubbed गर्नुपर्छ। यस मामला मा, रोगी सानो शरमाना पार्सल गर्नुपर्छ (कहिले काँही त्यहाँ अलिकति जलन छ)।
आफ्नो जीवन, भण्डारण र वितरण विधिहरू
चिकित्सकको निर्धारण बिना काउन्टर भन्दा दबाइ जारी।5वर्ष को आफ्नो जीवन। यो अवधि पछि, दबाइ को disposed हुनुपर्छ। प्रयोग निषेधित मलम SPOILED।
म जेल "Nikofleks" कसरी भण्डारण गर्नुपर्छ? डाक्टर को समीक्षा यस दबाइ सर्वश्रेष्ठ तापमान 25 डिग्री भन्दा बढी गर्छ जहाँ एक गाढा ठाउँमा भण्डारण गरिएको छ कि रिपोर्ट।
बाह्य धन र analogues लागत
के यस्तो "Nikofleks" रूपमा बाह्य तयारी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ? यो दबाइ को Analogues लगभग सबै drugstores मा पाइन्छन्। सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी निम्न हालतमा हो: "Espoli" र प्लास्टर मरिच "डा मरिच।" यो दुवै रूस मा उत्पादन दबाइ प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। तिनीहरूले पनि यसलाई सम्भव कुनै पनि दुखाइ syndromes हटाउनु बनाउँछ जो capsaicin, समावेश।
कति गर्दछ मलम "Nikofleks"? यो उपकरणको लागि मूल्य धेरै उच्च छैन। तपाईं 195-220 rubles को लागि गर्न सक्छन् दबाइ को 50 ग्राम किन्न। दबाइ को एक ट्यूब धेरै उपचार को लागि पर्याप्त छ।
स्थानीय दबाइ "Nikofleks" बारे प्रशंसापत्र
मलम "Nikofleks" - सामयिक अनुप्रयोगको लागि एक एकदम लोकप्रिय दबाइ। यो दबाइ प्रयोग गर्नेहरूलाई को प्रतिक्रिया अनुसार, यो पूर्णतया कार्य सामना छ।
को जेल दुखाइ लागू जोडों र मांसपेशीमा बरु चाँडै गायब मा पछि। यस मामला मा, यो धेरै सुखद वार्मिंग प्रभाव देखिन्छ। पीडादायी क्षेत्रमा मा मलम राख्नु ओछ्यानमा अघि भएको, विरामीहरु बिहान सम्म बेचैनी महसुस छैन।
तयारी "Nikofleks", कहिलेकाहीं बारेमा उहाँलाई फेला र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू बारेमा सकारात्मक सन्देश बाहेक। यी विरामीहरु कि रिपोर्टिङ दबाइ एलर्जी गुनासो। तथापि, विशेषज्ञहरु दर्शाउन धेरै मानिसहरू जेल साइड इफेक्ट गर्न शरीर गरेको सामान्य प्रतिक्रिया भ्रममा छ।
पनि यो मलम संग उपचार समयमा केही विरामीहरु मा कहिले काँही दबाव कम र एक ज्वरो देखा कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यस मामला मा, दबाइ रद्द गर्न राम्रो छ।
Strait सुपर - प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
आँखा खस्छ "Travatan": समकक्षों
Psoriasis विरोधी Psori नैनो लागि क्रीम: समीक्षा
फ्लस Mixers एक्रिलिक bathtubs: समीक्षा, वर्णन, मोडेल र समीक्षा
अधिकतम क्यासिनो: ग्राहक समीक्षा
लोकप्रिय बच्चा वाहक: फर्महरू, विशेषताहरू, किन कि जब तपाईं ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ
टंगस्टन को रासायनिक गुण। विशेषताहरु र tungsten को आवेदन
व्लादिमीर Kogan: जीवनी, फोटो Kogan व्लादिमीर Igorevich
Vikings को बारेमा रोमान्स: वयस्क लागि सबै भन्दा राम्रो दन्तिये शीर्ष
म कसरी सदस्यमा इंजेक्शन गर्छु? Intracavernous इंजेक्शन